Izinketho zezezimali, Call and Put, incazelo eningiliziwe | Ezezimali Zomnotho
Phakathi kwezinsimbi ezehlukene ezitholakala kwezimali sithola Izinketho Zezezimali. Izinketho yizinkontileka ezithengiswa phakathi kwabathengi nabathengisi. Banikeza abanikazi babo ithuba (kodwa hhayi isibopho) sokuthenga noma ukuthengisa izibambiso ngentengo emisiwe ngokuzayo. Ukukwazi ukusebenzisa le nkontileka nelungelo akuyona inkululeko, ngoba ukube bekunjalo, bekuzoba khona kuphela ithuba lokuwina noma lokungalahlekelwa. Ukuze uthenge le nkontileka, kufanele ukhokhe lokho okubizwa nge- "premium" kumthengisi. Ngokuphambene nalokho, uma ungumthengisi, uba ngumamukeli wale phrimiyamu.
Njengoba Izinketho Zezezimali zidinga ulwazi olukhulu lwezomnotho nezezezimali, akuwona umkhiqizo olula ukuwuqonda. Ngalokhu, le ndatshana ihloselwe ukuchaza indlela ye- ukuthi zisebenza kanjani nokuthi kusho ukuthini ukuba ngumthengi noma umdayisi we-Call noma uPut. Futhi nezingozi ezahlukahlukene ezihilelekile nokuthi yiziphi izinzuzo ezilethwa yile ndlela ukutshala imali. Ngiyethemba uyithola ilusizo!
1 Yini Inketho Yezezimali?
2 Yini inketho yocingo?
2.1 Thenga Ucingo
2.2 Thengisa Ucingo
3 Yini inketho yokubeka?
4 Kuthiwani uma ufuna ukuthengisa izinketho zezezimali ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi?
Yini Inketho Yezezimali?
Inketho yezezimali yinkontileka esungulwe phakathi kwezinhlangothi ezimbili (umthengi nomthengisi) enikeza umthengi wenkontileka / inketho ilungelo, kodwa hhayi isibopho, sokuthenga (uma ethathe Ucingo) noma ukuthengisa (uma ethathe Beka) ngentengo enqunyiwe yesikhathi esizayo yefa. Ngokolunye uhlangothi, umthengisi wenkontileka / inketho unesibopho sokuthengisa noma ukuthenga ngentengo okwakuvunyelwene ngayo noma nini lapho umthengi ethanda.
Zisetshenziswa kabanzi njengezindlela zokubiyela, kusukela benza njengohlobo "lomshuwalense". Uma abatshalizimali bakholelwa ukuthi kungahle kube nokunyakaza okungazelelwe emakethe, kungenzeka ukuthi kuthengwe inketho yezezimali. Futhi njengethuba lokuzuza ngokuhamba okungazelelwe ngoba ukulahlekelwa kunqunyelwe futhi inzuzo ayinamkhawulo (ngizokhuluma ngalokhu ngokuhamba kwesikhathi).
Ukuze usebenzise leli lungelo, njalo umthengi ukhokhela umthengisi imali ekhokhelwayo. Umthengisi wenketho yezezimali uhlala ethola imali ekhokhelwe ngumthengi. Ukusuka lapha, ngamanye amagama, inkontileka isisunguliwe. Ngabe le nkontileka isho ukuthini eqenjini ngalinye? Ukwenza lokhu, ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezimbili zezinketho zezezimali ezikhona, i-Call ne-Put, nokuthi kusho ukuthini ukuba ngumthengi noma umthengisi esimweni ngasinye.
Yini inketho yocingo?
Ucingo lungashayelwa futhi Inketho yokuthenga. Kuyisivumelwano ukuthi ikuvumela ukuthi uthenge impahla ngokuzayo ngentengo ebekiwe. Lezi zinketho zezezimali zingaba nezitoko ezingaphansi, izinkomba, izimpahla, imali engenayo engaguquki ... Kunokuhlukahluka okukhulu. Ukufana nokwehluka phakathi kwezinketho ze-Call and Put kulele ekutheni ama-Calls abe ngamalungelo okuthenga kanye namalungelo we-Put okuthengisa. Akunasibopho sokuthenga ekuvuthweni (ngaphandle komthengisi). Kepha ukuze siqonde kangcono lo mshini, ake sibone ukuthi kusho ukuthini ukusebenza nabo.
Ngokukhetha kokushaya ucingo umthengi angakhetha intengo angathanda ukuyithenga ngokuzayo. Ngokusobala, sonke singathanda ukukhokha okungcono kakhulu. Ngalokho, kukhona i-premium (inani elibiza inkontileka). Uma intengo ofuna ukuyithenga ingaphansi kwentengo yohlu lwamanje, i-premium izobiza. Futhi intengo iphansi, i-premium ebiza kakhulu (imvamisa ilingana). Ngakho-ke, amanani ajwayele ukusethwa (futhi kuyinto ejwayelekile kakhulu) asondele kakhulu noma ngaphezulu kwenani elisohlwini. Ngokuya kude lapho uzoba khona, kuzoba nzima kakhulu ukuthi isaphulelo sifike, futhi ngenxa yalokho, imali eshibhile izobiza.
Isibonelo sokuqala uma kwenzeka ulahlekelwa. Ake sicabange ukuthi sifuna ukuthenga inketho enkampanini X ehweba ngo- $ 20. Sifuna ukuthenga inketho yeCall ephelelwa yisikhathi enyangeni eyodwa bese sinquma ukukhetha u- $ 50 bese sikhokha imali ekhokhwayo engu- $ 21. Ngemuva kwale nyanga isitoko sehle kakhulu futhi sise- $ 1. Kulokhu sinqume ukungathengi ngo- $ 15 (ngoba nathi asizona izilima). Ukulahlekelwa? Iphrimiyamu esiyikhokhayo, $ 1. (Izinkontileka zivame ukuba ngamasheya ayi-100, ngakho-ke imali ekhokhwayo iba ngu- $ 1 kusabelo ngasinye esivumelwaneni. Uma kukhona okungu-100, ukulahlekelwa kungaba ngama- $ 100)
Isibonelo sesibili uma kwenzeka ukuwina. Sithenga i-Call yethu ngo- $ 1 enkampanini X. Njengakuqala, ibhalwe ku- $ 20 futhi siyithenge ngelungelo lokuyithenga uma sifuna ku- $ 50 (okufanayo). Siyabona ukuthi inkampani iyaqhubeka nokunyuka ngentengo, ekugcineni ekuvuthweni iku- $ 21. Senzani? Ilungelo lokuthenga u- $ 24 lisetshenzisiwe futhi njengoba imakethe iku- $ 20 sithola u- $ 21 ngesabelo ngasinye esithengiwe. Vele, leyo akuyona inzuzo yokugcina, iprimiyamu ekhokhiwe ibingu- $ 24, ngakho-ke uzothola ngempela u- $ 20 ngesabelo ngasinye. Esimweni esinjalo umholo awunamkhawulo.
Ukuba ngumthengisi weCingo kanye noPut kusho ubungozi obukhulu kakhulu. Lapha ukulahlekelwa akukhawulelwe, kepha akunamkhawulo. Ngokuphikisana nomthengi, inzuzo inqunyelwe, ngoba okutholwayo yiprimiyamu.
Ukuba ngumthengisi kusho ukuba ngumamukeli we-premium, futhi unesibopho sokuthengisa noma nini lapho umthengi ekufuna noma kumfanele. Uma iKholi ithengisiwe, into efanelekile kungaba ukuthi intengo yempahla ilingana noma ingaphansi kwenani uPut athengiselwe lona (futhi ugcine iphrimiyamu ephelele). Isimo esibi kunazo zonke kungaba ukuthi impahla ikhuphuke kakhulu, ngakho-ke lapho ikhuphuka kakhulu, iqembu elithenga kakhulu kuzodingeka likhokhwe.
Yini inketho yokubeka?
I-Put nayo ingabizwa put inketho. Kuyisivumelwano ukuthi ikuvumela ukuthi uthengise impahla ngokuzayo ngentengo ebekiwe. Lezi zimpahla zingafana nezingcingo, okungukuthi, amasheya, izimpahla, izinkomba ... Kunokwehluka okufanayo.
Ngokungafani Nezingcingo, izinkontileka zokhetho ezibekiwe zibonisa intengo lapho impahla ingathengiswa khona ngokuzayo. Kulokhu, imali oyikhokhela i-premium, iyoba phezulu njengoba sikhetha intengo ephakeme yesikhathi esizayo. Ngokuphambene nalokho, i-premium izokwehla njengoba inani eliboniswe ku-Put liphansi. Ekugcineni, emuva kokukhethwa kukho kwezingcingo, unelungelo lokuthengisa (kodwa hhayi isibopho) uma ungumthengi. Uma ungumthengisi wesivumelwano se-Put, kunesibopho. Ukuze sikuqonde kangcono, ake sibone umehluko phakathi kokuba ngumthengi noma ukuthengisa inketho ye-Put yezimali.
Ake sicabange ukuthi sibhekene nesimo lapho sicabanga ukuthi imakethe ingehla kakhulu. Sinqume ukuthenga inketho yokubeka ku-Ibex-35. I-Ibex inamaphoyinti angama-8150, kanti namhlanje, okunguMsombuluko, sinqume ukuthenga inketho ye-Put ngokuphelelwa yisikhathi ekupheleni kwesonto nelungelo lokuthengisa ngo-8100 sikhokha imali engu- € 60.
Kungenzeka zimo ezimbili, ukuthi uma kuphelelwa isikhathi intengo ingaphezu kuka-8100 noma ngaphansi.
Uma intengo ingaphezulu kuka-8100. Asisebenzisi ilungelo lokuthengisa, ngoba ngaphezulu kwalokho kufanele sithengise eshibhile kunemakethe ngaleso sikhathi. Silahlekelwa yi-premium, i- € 60 futhi yilokho kuphela. Lokho Yilahleko enkulu lapho siziveza khona.
Uma intengo ingaphansi kuka-8100. Uma kunjalo, sikhetha ukusebenzisa ilungelo lokuthengisa ku-8100. Inzuzo umehluko phakathi kuka-8100 nentengo ye-Ibex. Uma intengo ingu-7850 € 250 etholakalayo. Ukuhlanza kungama- € 190, ngoba imali ekhokhwayo ibiza u- € 60. Ukuba ngumthengi wePut kuholela ku- Imali engenamkhawulo ingahle yehle njengoba amanani entengo ehla kwempahla eyisisekelo.
Ukuba ngumthengisi wenketho yokubeka kusho ukuthola i-premium ngaphambili. Ukuba ngumthengisi, unesibopho sokuthengisa ngentengo okuvunyelwene ngayo uma umthengi efisa ukuvuthwa.
Uma intengo yempahla inyuke ngaphezu kwaleyo evela esivumelwaneni, ayikho inkinga, akekho ofuna ukusebenzisa ilungelo lokuthengisa eshibhile lapho impahla ibiza kakhulu. Kodwa-ke, uma intengo yempahla yehle kakhulu, umthengi angasebenzisa ilungelo lokuthengisa ngokubiza kakhulu. Kumele ukhumbule icala langaphambilini. Ukube iPut ye-Ibex-35 ibithengiswe ngo-8100 futhi yavalwa isonto ngo-7850, kuzodingeka kukhokhwe u- € 250. Ingozi lapha ukuthi i-Ibex (noma ngabe ikuphi) ingalahla okuningi kakhulu, ngakho-ke ukulahlekelwa kukamabhalane wakwaPut (ngokuqondene nomabhalane weCall) akunamkhawulo.
Kuthiwani uma ufuna ukuthengisa izinketho zezezimali ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi?
Uma ufuna ukuthengisa ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi, imali oyikhokhela njengamanje izotholwa inkontileka yenketho yezezimali ebesiyithengile. Uma ithengiswa ngentengo ephezulu (i-premium), izowinwa, futhi uma iphansi, izolahleka.
Amaphrimiyamu azoba nokushintshashintsha kuze kuphele inkontileka, kuzoya ngezici ezimbili:
Njengoba ukuvuthwa kusondela, amaphrimiyamu azokwehla ngenani. Lokhu kungenxa yokuthi impahla ayinamathuba amancane okuthola ukwehla okungazelelwe kwentengo yayo. Ukuvuthwa kwezinsuku ezi-2 akufani nokuvuthwa kwezinyanga ezimbalwa.
Njengoba intengo ihambela phezulu nangaphansi, amaphrimiyamu azokhuphuka noma ehle ngenani. Lokhu kuzoncika ekutheni ngabe kuyikholi noma inketho yokubeka. Endabeni Yezingcingo, njengoba intengo yempahla inyuka, ne-premium izokwenyuka. Endabeni kaPut, njengoba intengo yempahla yehla, iphrimiyamu izokhuphuka. Futhi ngokufanayo kubo bobabili, amaprimiyamu azokwehla ngezingcingo njengoba intengo yempahla yehla, noma esimweni sikaPut imali ekhokhwayo izokwehla njengoba intengo yempahla inyuka.
Akuwona wonke ama-broker noma izinhlangano ezikuvumela ukuthi usebenze ngezinketho zezezimali ngendlela efanayo njalo. Konke kuncike kubalingani abanabo, indlela abasebenza ngayo kanye nezimpahla ezimelwe izinketho. Ngokufanayo, impahla ngayinye imelwe kwinkontileka ngokuhlukile. Akuwona wonke amaphuzu wezingcaphuno anenani elifanayo, amanye amaphuzu abaluleke kakhulu kanti amanye amancane kakhulu. Qiniseka ukuthi ulazi kahle inani nemibandela oyitshala imali!
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Izinketho zezezimali, Shayela futhi ubeke